Isidididi ngohambo lwamaciko nabamaSATMA | isiZulu
Isidididi ngohambo lwamaciko nabamaSATMA
Durban - IPHOXEKE yaswela umgodi wokucasha intandokazi kamaskandi, uKhuzani "iNdlamlenze" Mpungose obesekusabalele izindaba zokuthi ihamba nabeSouth African Traditional Music Achievement Awards (Satma) ukuya e-United States of America (USA) isitshelwa ngomzuzu wokugcina ukuthi ayiyi lapho.
Okufike kwaqubula imibuzo ngalolu hambo lwayizolo ngoLwesithathu, wukungahambi kukaKhangelani "DSD" Mhlongo weqembu oSaziwayo - okunguyena vele obekufanele ahambe kwazise ngokohlelo lwamaSatma kufanele kuhambe umuntu onqobe iBest Song of the Year ngonyaka odlule.
Kuthiwa uKhuzani - obevele efakwe ngewindi kulolu hambo - ufonelwe ngoLwesibili ebusuku ngumsunguli wamaSatma, uDkt Dumisani Goba, wamtshela ukuthi akasalubhadi phesheya ekubeni kade esezilungise zonke izimfanelo zalolu hambo.
Umthombo weLANGA uthi ukuhoxiswa kukaKhuzani kungenxa yengcindezi yabalandeli boSaziwayo abebeyifaka kwabamaSatma bethi bazoziqhelelanisa nalo mncintiswano ngokuzayo uma kuwukuthi kuhanjiswa umculi ongawinanga. UDSD unqobe lolu hambo eqhudelana noMjikijelwa "iChalaha" Ngubane, uMthandeni "iGcokama Elisha" Manqele naye uKhuzani.
Kubikwa nokuthi uDSD ubexhumana nehhovisi lamaSatma usuku nosuku ethi ngeke kwenzeke ukuthi kube nomculi ohamba naye ngoba kufana nokuthi kudliwa amandla akhe. "Ukuhamba kukaKhuzani bekufihliwe ngoba abalandeli boSaziwayo bebengafuni nakuyizwa leyo. Uqokwe ngoba uDkt Goba ubethi ungumculi ohamba phambili okwamanje kumasikandi," kusho umthombo.
Kuthiwa uKhuzani uthunyelelwe isimemo sohambo ngoNhlangulana (June) wathengelwa nethikithi kwenziwa neVisa nokunye okuningi.
Ethintwa uKhuzani ngalolu daba, uthe uthole ucingo kuDkt Goba wathi uyaluhoxisa uhambo ngoba usezwile ukuthi sekukhona asebezwile ngalo kanti belushayelwa phansi.
"Akunankinga okwenzekile, kusho ukuthi bekungadaliwe kodwa ngihlukumezeke kakhulu ngoba konke bese kumi ngomumo," kusho uKhuzani.
Kubikwa ukuthi ikhona inhlesana yokungahoshelani kahle phakathi kwalaba baculi ababili abangaphansi kwenkampani eyodwa, Izingane Zoma Music Production, esingenelele ngisho kubalandeli babo.
Kuthiwa lokhu kubonakale ngokuthi uDSD ashaye phansi ngonyaka ngisho esezwile ngamahlebezi ukuthi uzohamba noKhuzani. NgeSonto emcimbini womviliyelo wamaSatma obuseThekwini, uDSD utshele izinkumbi zabalandeli bakhe ukuthi uma kukhona umculi okuthiwa uhamba naye, kuyobe uzihambele ngobunyoka bakhe.
Ethintwa uNkz Zandile Ndzimande okhulumela abamaSatma, uthe akanalo igama likaKhuzani ohlwini lwabahambayo kanti uDSD yena uzohamba namhlanje kusihlwa.
ISITHOMBE: ILANGA library